R & D - Ruizheng Teknolojia Co., Ltd.
Research Sava lalana
Various R & D hetsika anisan'izany Fiomanana, vokatra teknika fanaovana fitiliana sy ny fitsipiny ho an'ny vokatra simika. Ny orinasa dia be mpampiasa agglomération ny fahalalana, ny teknolojia, ny talenta sy ny singa vaovao hafa, ka manatanteraka siansa sy ny teknolojia zava-baovao ao anatin'ny fanatontoloana ara-toekarena sy fampandrosoana ny fahalalana haingana ny toe-karena.
Ny orinasa dia manana fikarohana maro ny fiaraha-miasa ekipa. Mandritra izany fotoana izany, ny ekipa javatra dia avy amin'ny tanora mpianatra doctorat dia mandroso, izay nametraka ny talenta fototra ny fampandrosoana haingana ny R & D. Ny ekipa mifikitra amin'ny foto-kevitra ny mikatsaka ny tsara indrindra sy tsy misy fiafaràny, miezaka ny hanaterana malalanay mpanjifa vokatra tsara kalitao.
Isika no nametraka fiaraha-miasa amin'ny orinasa maro. Research laboratoara sy ny orinasa toby no naorina nanerana an'i Shina, anisan'izany ny headquaters ao Shanghai, orinasa base in Jiangshu, Zhejiang sy Hubei. Manana ny fahafahana miteraka vokatra tsara ary koa ny manamaivana fandotoana ny tontolo iainana, ny harena sy ny angovo noho ny famokarana.